भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? थाहा पाउनुहोस् – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? थाहा पाउनुहोस्
admin August 2, 2020 धर्म सँस्कृति	0
हिन्दु शास्त्र अनुसार यदि कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ ।
महाशिवरात्री नजिकिएसँग पशुपति क्षेत्रमा बाबा (साधु)हरुको देखियो यस्तो रूप (भिडियोमै हेर्नुस्)